.: Ko Moe's Electronics Notes :.: June 2010
Smart Grid Power System ဆိုတာက အရင်တစ်ခါ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ Bi-directional e-meter နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ဒါကတော့ Whole system အကြောင်းပါ။ နိုင်ငံတော်တော်များများ (ဥရောပ၊ ယူအက်စ်၊ သြဇီ၊ တရုတ်) မှာ အပိုင်းလိုက်လေးတွေ ခွဲလုပ်နေကြပါပြီ။ စင်ကာပူနဲ့ မလေးရှားကတော့ ၂၀၁၃ မှာ အတော်အသင့် တပ်ဆင်ြံပီးတဲ့အထိ လုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သဘောတရားကတော့ အိမ်တွေမှာ Renewable energy source (Solar, Wind) တွေ တပ်ဆင်ထားမယ်။ သူတို့က ရတဲ့ ပါဝါတွေက နေ့ပိုင်း အသုံးနဲတဲ့ အခါမှာ ပိုလျှံတဲ့ ပါဝါတွေကို National Grid ထဲပြန်ရောင်းပြီးတော့ ညပိုင်း အသုံးများတဲ့ အချိန်တွေကျတော့ ပြန်ဝယ်သုံး အဲ့ဒီသဘောပါပဲ။ ပိုလျှံတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို Store လုပ်ထားဖို့လည်း မလိုတဲ့အတွက် Additional cost တွေ ကျသွားမယ်။ အဲ့ဒီသဘောပါပဲ။
အဓိက လိုအပ်ချက်ကတော့ နဲ့ တွေပါပဲ။ ဒီနည်းစံနစ်က အခု တဖြည်းဖြည်း စလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အတော်ကြီးနေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် တရုတ်ပြည်မှာပါ။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, June 30, 20102comments:
Labels: Energy Meter, Green Energy, Renewable Energy
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, June 22, 2010 1 comment: